မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: 09/01/2014 - 10/01/2014
Posted by mabaydar at 11:18 AM5comments :
Free & Easy Korea Trip Day3(Part 2): Everland -> Eating Street Foods and Exploring Gangnam
P.S ဒီ ပိုစ့်လေးကတော့ မဆွေလေးမွန် (www.whitewhitemind.blogspot.com) နဲ့ သူကြီးမင်း(တုံးဖလား) (http://kokomaunguk.blogspot.co.uk/) တို့ရဲ့ BPP Challenge မှာ nominate လုပ်ခံထားရလို့ ရေးလိုက်ပါတယ်... ပိုက်ဆံကိုလဲ TP Myanmar Helping Hand Organization ရဲ့ လစဉ် Contributor အဖြစ် အစကတည်းက လှူလာတာ ခုဆိုရင် နှစ်နဲ့ချီနေပါပြီ... နောက်မှ အဲဒိအကြောင်းကို သေသေချာချာရေးရင်း ထပ် Challenge မဲ့လူတွေကို ပြောပါအုံးမယ်...
၁၁ရက် ဇူလိုင်လ ၂၀၁၄ (သောင်္ကြာနေ့)
ကံမကုန်လို့ ပြန်ဆုံခဲ့တဲ့ EVERLAND
Going to Normal Ticket Counter
Everland ဂိတ်ဝကိုရောက်တော့ သာမာန်သူများတွေ လက်မှတ်ဝယ်တဲ့ကောင်တာကိုသွားရင်း ကိုယ်ထုတ်လာတဲ့ Discount Coupon ကိုပြတော့ သူတို့ဆီမှာ ၀ယ်ရမှာ မဟုတ်ဘူးတဲ့… တိုးရစ်ကောင်တာ သက်သက်ရှိတယ်တဲ့ ဟိုဘက်နားအဆောင်ကို ပြတယ်… သူကလဲ အင်္ဂလိပ်လိုသိပ်မပြောတတ်ဘူး… ကိုယ်တွေလဲ ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ သူပြတဲ့ဘက်ကို လျှောက်သွားလိုက်တယ်… တိုးရစ်ကောင်တာက အဆောင်လေးသပ်သပ်ပေါ့… အဲ့ဒိက ကောင်မလေးတွေကတော့ အင်္ဂလိပ်လို ပြောတတ်ကြတယ်… ကောင်မလေးက သဘောကောင်းတယ်… ကျွန်မတို့ ရောက်သွားတဲ့အချိန်က ၄နာရီ ၁၀မိနစ်လောက်ရှိနေပြီဆိုတော့ သူက ၄နာရီခွဲဆိုရင် ပန်းခြံဝင်ခကို ဈေးပိုချပေးတယ်တဲ့… စောင့်မလားဆိုတော့ ကိုယ်လဲ မိနစ် ၂၀နဲ့ ၀မ်၈၀၀၀ လောက်သက်သာမယ်ဆိုတော့ Bibimbap တစ်ပွဲဖိုးလောက်ရှိတော့ စောင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်… မဗေဒါအစ်မကလဲ သက်တောင့်သက်သာရှိမဲ့ အကျီင်္တစ်ထည်ဝယ်ဖြစ်တယ်… မဗေဒါကလဲ အသက်ကြီးလာတော့ အဲ့ဒိ Ride တွေ ဒီလောက်မစီးနိုင်တော့ဘူး… အထူးသဖြင့် ပင်ပန်းရင်ပိုမစီးနိုင်ဘူး… နေကလဲ ပူနေတော့ ရေခဲမုန့်စားချင်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်… ဒါနဲ့ ဟိုဘက်နားက စူပါမတ်ကတ်ဝင်ကြည့်ရင်း ရုပ်ရှင်ထဲမှာ သူတို့တွေစားနေကျ ပလပ်စတစ်ချောင်းထဲမှာ အဲဒိ ပလက်စတစ်ချောင်းခေါင်းကို ချိုးပြီးစုတ်စားရတဲ့ ရေခဲချောင်းဝယ်စားဖြစ်တယ်… အရသာက ထင်ထားတာထက် တော်တော်ကောင်းတယ်… ဈေးကလဲ ချိုပါ့… ၀မ် ၃၀၀ ပဲပေးရတယ်... ကျန်တဲ့ ၂ယောက်တောင် ကြိုက်သွားလို့ လိုက်ဝယ်စားကြတယ်… ရေခဲချောင်းလေးစားလိုက်မှ လန်းဆန်းသွားတော့တယ်…
Gangnam ကိုသွားတဲ့ကား ဟုတ်လားလို့ မေးတာကိုပါ ကိုရီးယားလို ရေးပေးထားတယ်...
၄နာရီခွဲမှ ကောင်တာမှာ သွားဝယ်တော့ ကျွန်မတို့ ၁ယောက်ကို ၀င်ကြေး ၀မ် ၃သောင်းစီပဲ ပေးရတယ်… ၄နာရီခွဲ Discount ရော၊ Coupon ရော ၂ခုလုံးရတယ်… အစက မူရင်းဈေး ၀မ် ၄သောင်း ၆ထောင်ကို Discount coupon သုံးရင် ၀မ် ၃သောင်း ၇ထောင်နဲ့ရမှာ။ ခုတော့ ၃သောင်းပဲ။ (ခုရေးနေရင်းနဲ့မှ Everland website မှာ ထပ်သွားကြည့်တော့ Double Discount မရဘူးလို့ရေးထားတယ်… ကျွန်မတို့ ဘာလို့ရခဲ့လဲတော့ မသိ)… အဲဒါနဲ့ တစ်ခါတည်း အင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်တဲ့သူတွေ့တုန်း အပြန်ဘယ်လိုပြန်ရမလဲပါတစ်ခါတည်းမေးလိုက်တာပေါ့… ကောင်မလေးက သဘောကောင်းပါတယ်… ကျွန်မတို့က သူပြောတာတောင် ယောင်လည်လည်ဖြစ်နေလို့ စာနဲ့ပါ သေချာရေးပြတယ်… အမှန်တော့ Seoul ကို bus 5007 ပြန်စီးရမယ်ဆိုပေမဲ့ အဲဒိ 5007 ရပ်တဲ့ နေရာကိုသွားဖို့ Everland ထွက်ပေါက်ကနေ Carpark5က Shuttle bus ကို စီးရမှာ… ၂ဆင့်စီးရမယ်ဆိုတော့ ကျွန်မတို့က မျက်စိလည်သွားတာ… သူရေးပေးတဲ့ စာရွက်ပျောက်မှာစိုးလို့ တစ်ခါတည်း ဓာတ်ပုံရိုက်ထားလိုက်တယ်… ပြီးရော….
ချစ်စရာ Decoration လေးတွေ...
Everland ကတော့ ကျွန်မအတွက်ဒုတိယအကြိမ်ထပ်ရောက်ခဲ့တဲ့ နေရာပေါ့… ပထမတစ်ခေါက်ရောက်ခဲ့တာတောင် မနေ့တနေ့လိုပဲ အဲ့ဒိနေရာကိုလဲ ရင်းနှီးနေတုန်းပဲ… ၀င်ပြီး စီးစရာတွေ့တာနဲ့ ကဲ စီးကြမယ်ပေါ့… ကျွန်မအစ်မက အဲ့ဒါတွေစီးရတာ သိပ်ကြိုက်တာ… ကျွန်မသူငယ်ချင်းကတော့ ရောက်တာတန်အောင် အကုန်လုပ်တယ်… ငြင်းတာကိုးမရှိဘူး… သူက ကျွန်မထက်ခံနိုင်ရည်ရှိတယ်… ဒီတော့လဲ ကောင်းပါတယ် သူတို့ ၂ယောက်စီးကြပေါ့… ကျွန်မကတော့ နောက်ရက်တွေအတွက်ပါ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထိန်းရမယ်… ဒါတောင် ပထမ Ride ကို သူတို့ အဆွယ်ကောင်းလို့ တက်စီးလိုက်သေးတယ်… ဗွီဒီယိုတောင် စီးနေရင်း ရိုက်လာဖြစ်သေး… မဗေဒါက အမြင့်ကို မကြောက်ပါဘူး… ဒါပေမဲ့ လည်ရင်တော့ မူးတာကို မကြိုက်ဘူး… သူတို့ Ride တော်တော်များများက လူကို လှည့်ပြီး ဇောက်ထိုးမိုးမျှော်တာတွေက များတယ်… ခုတက်စီးတဲ့ဟာဆိုလဲ လည်လဲလည် လွှဲလဲလွှဲပေါ့… အဲဒါစီးပြီး လူက အရမ်းမဟုတ်ပေမဲ့ နည်းနည်းတော့ မူးချင်ချင်ဖြစ်သွားတယ်… နောက်တစ်ခု ထပ်စီးရင် သေချာပေါက်မူးပြီ… ကိုယ့်ကိုကိုယ်လဲ အားမရပါဘူး…
T-Express ဆီက အပြန် ရေပန်း show လုပ်သွားတဲ့ နေရာ...
သူတို့ကတော့ T-Express ကို ဆီကိုသွားတဲ့လမ်းမှာ Roller Coaster တစ်ခု ၀င်စီးလိုက်သေးတယ်… သူတို့စီးတဲ့အချိန်ကိုယ်လဲ စောင့်ရင်းနားရတာပေါ့… နောက်တစ်ခု သူတို့စီးတဲ့ Double Rock Spin ဆို လူတွေက အသားကင် (kebab) ကျနေတာပဲ ထိုင်ခိုင်းထားပြီးတော့ လှည့်တာ လှည့်တာဆိုတာ ပြောမနေနဲ့တော့… ကိုယ်မစီးပဲ ကြည့်တာနဲ့တင် အဲဒါကြီး မစီးချင်တာ… ကိုယ်လဲ ငယ်ငယ်က အားလုံးနီးပါး စီးဖူးပြီးပြီဆိုတော့ အရသာသိနေပြီ… အဲဒါစီးပြီးတော့ သူတို့ ၂ယောက် နည်းနည်းတော့ မူးသွားပုံရတယ်… T-Express Wooden Roller Coaster ဘက်အသွားမှာ Parade လိုမျိုး ၀တ်စုံတွေနဲ့ အလှပြယာဉ်တွေနဲ့ ကပြနေတာတွေ့လိုဝင်ကြည့်လိုက်တော့မှ သူတို့က ရေတွေနဲ့ပါ ပရိတ်သတ်ကိုတကယ်ပက်တာ… တချို့တွေကတော့ မိုးကာအကျီဝတ်ထားပြီးသားတွေ… ကိုယ်ကတော့ ကိုယ်စိုတာ ကိစ္စမရှိ… ရိုက်နေတဲ့ ကင်မရာကို ကာကွယ်ရတယ်… ဒါပေမဲ့ ရေနဲ့ပက်ခံလိုက်ရတော့မှ ခေါင်းမူးပြီး အီလည်လည် နုံးတုန်းတုန်း ဖြစ်နေတာ ပျောက်ပြီး ပြန်လန်းသွားတယ်… ပြီးတော့ သူတို့ ၂ယောက်စီးတဲ့ T-Express မှာ ထပ်စောင့်ရပြန်ရော တော်တော်ကြာကြာစောင့်ရတယ်… Everland က ဟိုဘက်မှာ အကျယ်ကြီးရှိသေးတယ်… တိရိစ္ဆာန်ရုံလို ဟာမျိုးလဲရှိတယ်ဆိုတာသိပေမဲ့ ကိုယ်ရောက်တဲ့အချိန်ကလဲ နောက်ကျနေတော့၊ သူတို့ စီးချင်တာတွေပဲ ပေးစီးလိုက်တော့တယ်… အနှံ့တော့ မရောက်မှာ သေချာနေပြီလေ…. အနှံ့သွားချင်ရင်တော့ မနက်ကတည်းကလာပြီး တစ်နေကုန်နေမှရမယ်ထင်တယ်… အဲဒါပြီးတော့မှ စောစောကလာလမ်းအတိုင်းပြန်လျှောက်ပြီး စောစောက ရေဖြန်းတဲ့နေရာရဲ့ တစ်ဖက်မှာတော့ ပန်းခင်းကြီးရှိတယ်… Running man episode 65-66 မှာ သူတို့ လူတွေကို စုပြီးခေါ်လာရတဲ့ နေရာပေါ့… အဲဒိမှာ ပန်းတွေက ရာသီလိုက် အမြဲပြောင်းစိုက်တယ်ထင်တယ်… အရမ်းလဲ လှတယ်… ကာတွန်း ရုပ်လေးတွေကို ပန်းနဲ့ပုံဖော်ထားတာတွေလဲရှိတယ်… အစုံပါပဲ… Amusement Park ကိုတော့ လူတိုင်းရောက်ဖူးကြမယ်ဆိုတော့ အသေးစိတ်ပြောမနေတော့ပါဘူး… ဒါပေမဲ့ Amusement Park ရောက်တိုင်း ဘယ်သွားသွားကြားနေရတဲ့ စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ တီးလုံးလေးတွေနဲ့ ပျော်စရာပတ်ဝန်းကျင်လေး ဖန်တီးပေးထားတော့ ကလေးဆန်တယ်ပဲဆိုဆို ကိုယ့်ကိုကိုယ် Fairy Tale ထဲရောက်သွားသလိုပဲ ခံစားရတဲ့ ခံစားချက်ကိုကြိုက်တယ်… ကိုယ်သာ ၁၀ကျော်သက်အရွယ်ဆို ကိုယ့်ဖူးစာရှင် မင်းသားလေးကို တွေ့လို့တွေ့ညား လိုက်ရှာကြည့်ချင်မိမှာပဲ…
ျRunning Man ပြိုင်တဲ့ ပန်းခင်းကြီး
အားလုံးက ကာတွန်းကမ္ဘာထဲရောက်နေ သလို...
My Secret Garden... Will I meet with Hyun Bin?
ကိုယ်မရိုက်ခင်က ဘယ်သူမှ မရှိဘူး ကိုယ်ရိုက်မယ်လဲဆိုရော လုယက်ရောက်လာကြတယ်... မနည်းအမြန်ရိုက်ခဲ့ရတယ်...
Young at our heart... We enjoyed fullest...
အဲဒိနေရာရောက်တော့ ညမှောင်သွားပြီ… အဲဒိကနေ ညဘက် မီးရှူးမီးပန်းဖောက်တာကို မစောင့်တော့ပဲ ပြန်မယ်အလုပ်မှာပဲ ညဘက် အလှပြ မီးတွေဆင်ထားတဲ့ ကားကြီးတွေနဲ့ Parade စတော့တာပဲ… အဲဒါရပ်ကြည့်ဖြစ်သေးတယ်… မဗေဒါအစ်မက အဲဒါမျိုးတွေ သိပ်ကြိုက်တာ… မဗေဒါက နိုင်ငံခြားလာတာ နိုင်ငံတကာက မင်းသားတွေအပြင်မှာ မြင်ဖူးချင်တဲ့ ကြီးမားတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိသလို… သူနိုင်ငံခြားလာတာလဲ Amusement Park ကောင်းကောင်းကို လျှောက်လည်ချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လဲပါတယ်… ဒါပေမဲ့ သူစကာင်္ပူကို ရောက်ခါစက Amusement Park ဆိုလို့ ကချောက်ကြီး ကချောက်ချက် Escape Theme Park ဆိုတဲ့ သေးသေးလေးပဲရှိတာ။ ခုနောက်ပိုင်းမှသာ Universal Studio ပေါ်လာတာလေ… သူအဲဒိ အလှပြကားတွေကြည့်နေတာတောင် ဗွီဒီယိုရိုက်ထားသေးတယ်… ခွိ…
သြစီသွားတုန်းကလဲ Gold Coast က Movie World မှာလဲ Parade ကြုံခဲ့ပါသေးတယ်… ဒါပေမဲ့ သိတဲ့အတိုင်း သြစီက မိုးမချုပ်ခင် ပန်းခြံပိတ်တာလေ…
Fairy Tale come true..
ကားကြီးတွေ လှတယ်... မီးဝတ်စုံလေးတွေ ကလေးလေးတွေက ကြိုက်ပြီး ချစ်စရာကောင်းပေမဲ့ ၀တ်ထားရပြီး ကနေရတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေကတော့ အတော်ပူမယ်...
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်မတို့ ပြန်တော့ ချောချောချူချူပါပဲ… ပထမ ဘတ်စ်ကားက ကျပ်ပြီးနေရာမရတော့ ကျွန်မတို့ မလိုက်တော့ပဲ နောက်ကားပဲစောင့်စီးလိုက်တယ်… တိုက်စီနဲ့ Korean Folk Village ကလာတောင် တော်တော်စီးရတာ ဘတ်စ်ကားနဲ့ Gangnam အထိရပ်စီးရမယ်ဆို စဉ်းစားသာကြည့်တော့လေ… နောက်ကားလာတော့မှ နေရာအေးဆေးရတယ်…
Everland ရဲ့ Discout Coupon Print ထုတ်ချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Everland ကို ဘယ်လိုသွားရမလဲ၊ Everland မှာ ဘာတွေစီးစရာ လုပ်စရာတွေရှိလဲ၊ ဘယ်အချိန်ထိဖွင့်လဲ ပိတ်လဲဆိုတဲ့ အချက်အလက်တွေအားလုံးကို Everland website မှာ တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်နော်…
ဒီဗွီဒီယိုလေးကတော့ Everland မှာ စီးခဲ့တာကို ရိုက်ထားတာပါ...
Eating Dukbokki at Gangnam
Bus 5002 က ကျွန်မတို့ မနက်က Korean Folk Village ကိုစီးတဲ့ ကားမှတ်တိုင်ကိုပဲ ပြန်ရောက်တာပါ။ Gangnam က မနက်ကလဲ လူရှုပ်သလို ညဘက်ကျတော့လဲ လူက စည်ကားနေတာပါပဲ… စကာင်္ပူက Orchard လိုမျိုးပေါ့။ လမ်းတစ်ခုကို ဖြတ်အလျှောက် လမ်းဘေးဈေးသည်လှည်းတန်းတွေတွေ့တာနဲ့ ၀င်မြည်းချင်စိတ်ပေါက်သွားတယ်.. ကိုရီးယားရောက်မှတော့ လမ်းဘေး Dukbokki (Korean Rick Cake) ကို စားခဲ့ရမှာပေါ့… လှည်းပေါ်က တုတ်နဲ့ ထိုးထိုးထောင်ထောင်တွေလဲ စားရမယ်လေ… ဘူဆန်းမှာတုန်းကမစားဖြစ်ခဲ့ဘူး… ဒီနေ့တော့ အခြေအနေပေးတယ်.. ကိုယ်တွေလဲ ဒစ်နာမစားရသေးတော့ အစာပြေဒါအရင်စားမယ်ပေါ့။ Gangnam မို့လို့ထင်တယ် လမ်းဘေးဆိုင်တွေက တခြားနေရာတွေထက် ပိုသားနားတယ်…. ကျွန်မတို့ လူရှင်းတဲ့ ဆိုင်ပဲဝင်လိုက်တယ်… ဆိုင်ရှင်အမျိုးသမီးက အင်္ဂလိပ်လို မဆိုးဘူး ပြောတတ်တယ်… ၀မ်း တူး သရီးဖိုး ပြောတတ်ရင်ကို တော်တော်အလုပ်ဖြစ်နေပြီလေ…
ကိုရီးယားမှာ Dukbokki စားကြည့်တော့ စကာင်္ပူက ထက်ပိုစားလို့ကောင်းတယ်။ စကာင်္ပူမှာ စားဖူးသမျှက မကောင်းတော့ Dukbokki ဆိုတာ ကိုရီးယားမှာလဲ ဒီလို အရသာမျိုးပဲဖြစ်မယ်ထင်ခဲ့ပေမဲ့ တကယ်တန်းကျတော့ စားကောင်းနေတယ်။ စကာင်္ပူက Dukbokki နဲ့ ကိုရီးယားက Dukbokki အရသာကွာတာကဘာလဲဆိုတော့ အနှစ်အရသာက အဲဒိ Rice Cake ထဲကို ထဲထဲဝင်ဝင်ဖြစ်နေတယ်။ စကာင်္ပူက Dukbokki တွေက ပါးစပ်ထဲရောက်လိုက်တာနဲ့ ဆန်လုံးကတခြား ဟင်းနှစ်က တခြားဖြစ်ပြီး ပါးစပ်ထဲမှာ ထမင်းချည်းစားနေရသလိုဖြစ်နေတာ။ နောက်ပြီး တုတ်နဲ့ထိုးထားတဲ့ ၀က်အူလိုလိုဘာလိုလိုကြီးက တကယ်တော့ ပဲလိပ်ထင်တယ်။ သူက ဈေးလဲတော်တော်ပေါတယ်။ စားလို့လဲ ကောင်းတယ်… ၀ါးလို့ကောင်းတယ်ဆိုပိုမှန်မယ်… Dukbokki တစ်ပွဲနဲ့ အဲဒိ ပဲလိပ်ချောင်းတွေဘာတွေ သုံးယောက် ဗိုက်အဆာပြေဆိုပြီးစားတာ စုစုပေါင်း ၀မ် ၄၄၀၀ ပဲကျပါတယ်... ဒါပေမဲ့ ကျွန်မတို့နောက်ထပ် ညစာထပ်မစားဖြစ်တော့ပါဘူး... အပြည့်အတင်းမဟုတ်ပေမဲ့ အနေတော်လေး ဗိုက်ပြည့်သွားပါတယ်...
Let’s explore Gangnam
အဲဒိဆိုင်မှာ စားသောက်နေတုန်းကတော့ ဘေးက ဖြတ်သွားဖြတ်လာလူတွေကို အရမ်းကြီး သတိမထားမိပါဘူး... စကာင်္ပူက အော့ချက်လိုပဲ သားသားနားနားတွေဝတ်စားပြီးသွားလာနေကြတယ်ဆိုတာလောက်ပဲ စိတ်ထဲရှိပါတယ်... စားပြီးသောက်ပြီးတော့လဲ ဖုန်းကိုကြည့်လိုက်တော့ Wifi မိနေတာနဲ့ တစ်နေကုန် အဆက်ပြတ်ခဲ့သမျှတွေကို ပြန်ကြည့် ဓာတ်ပုံရိုက်လာတာ တစ်ပုံ နှစ်ပုံ ဖေ့ဘွတ်ပေါ်ကောက်တင်... သုံးယောက်သား လှည်းနဲ့ဆိုင်တွေအဆုံးနားလေးမှာ လမ်းဘေးလေးကပ်ပြီး wifi ကိုသုံးတာ သုံးတာဆိုတာ... သုံးလို့ နည်းနည်းဝပြီး သတိလေးပြန်ဝင်တော့မှ ကိုယ်တွေရပ်နေတာ အမှိုက်အိတ်တွေစုထားတဲ့ အမှိုက်ပုံဘေးဖြစ်နေတယ်... (သေချာထုတ်ထားတော့ အနံ့က မရဘူးလေ)... အင်တာနက်ကလဲ ဂန်နမ်မှာ မြန်သလားမမေးနဲ့... ဒါတောင် Free Public wifi နော်... စကာင်္ပူကတော့ အော့ချက်မှာ အဲလို ၀ိုင်ဖိုင်ပေးနိုင်ဖို့ အတော်လိုက်ယူရအုံးမယ်...
ဒါနဲ့ ကဲပါလေ အင်တာနက်သုံးတာရပ်ပြီး ဂန်နမ်လေးကို ပတ်လိုက်ဖို့ ပြင်ဆင်လိုက်တာပေါ့... ဘယ်နေရာ ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက် Psy ပြောသလို Gangnam Style ဆိုတာ "Dress Classy, dance cheesy" ပဲထင်တယ်... သူတို့ Dance တာတော့ ကလပ်ဝင်ကြည့်မှ တွေ့မှပဲ... ဒါပေမဲ့ လမ်းပေါ်မှာ ၀တ်ထားကြတာတွေကတော့ အလန်းတွေချည်းပဲ... လူငယ်တွေချည်းပဲ လူကြီးတောင် မတွေ့ခဲ့ဘူး... ကောင်မလေးတွေ ကောင်လေးတွေဆိုတာလဲ ပိန်ပါး သန့်ပြန့် လန်ထွက်ပေါ့... ကျွန်မတို့သုံးယောက်ကတော့ မနက်ကတည်းက လက်လက်စင်အောင် လျှောက်သွားထားတော့ ကြောင်ချီးရုပ်နဲ့ သုံးယောက်ဖြစ်နေတာ... မတတ်နိုင်ဘူးလေ သူတို့ အဲလောက်လန်အောင်ဝတ်ပြီးမှ ဂန်နမ်လာမှန်း ကိုယ်မှ မသိတာ.. ကိုယ်လဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတိမထားမိခင်မှာတောင် ကိုရီးယား ကောင်လေးတွေ ကောင်မလေးတွေ လန်ထွက်ချောမောနေတာတွေကို လိုက် ငမ်း (အဲလေ) လိုက်ငေးရင်း လျှောက်နေမိသေးတာ... နောက်မှ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ၀ိဥာဏ်ကောင်လိုပဲ လူတွေက ကိုယ့်ကိုရှိမှန်းတောင် သိရဲ့လားမသိဘူး.. (ဟောင်ကောင် Lang Kwai Fong သွားတုန်းကလိုပဲ) ... အသိဝင်တော့မှ သုံးယောက်သား အချင်းချင်းကြည့်ပြီး ရီမိကြတယ်... ဒါနဲ့ပဲ ဒီမှာကြာကြာနေရင် Depression ပါဖြစ်သွားနိုင်တယ်... ကိုယ့်လောက်ခန္ဓာကိုယ်တောင် တစ်ယောက်မှမရှိဘူး.. ပိန်လှပ်နေကြတာ... Gangnam ဆိုတာ ဒါပါလားသိသွားပြီဆိုတော့ တော်သေးပြီပေါ့... ဒီလိုနဲ့ပဲ Myeongdong ကို ရထားပြန်စီးပြီး မနက်ကလာတဲ့ လမ်းအတိုင်း တမျှော်တစ်ခေါ်ကြီး ကုန်းပေါ်ပြန်တက်... တည်းခိုခန်းရှိတဲ့ ကုန်းအောက်ပြန်ဆင်းပြီး တည်းတဲ့နေရာကို သွားဖြစ်ခဲ့ကြတယ်... အဲဒိနေ့ကတောင် လမ်းမှာ ဖြတ်လမ်းတွေ့လို့တွေ့ညားဆိုပြီး လမ်းတစ်ခုကို ၀င်ကြည့်သေးတယ်... ဒါပေမဲ့ လမ်းက မှောင်ပြီး လမ်းဆုံးက အပိတ်ကြီးဖြစ်နေလို့ ပြန်လျှောက်လာရတယ်... (PS. နောက်မှ ကိုရီးယားက စက်ရုံကထုတ်တဲ့အတိုင်း ဆရာဝန်တစ်ယောက်ထဲလက်က ထွက်တဲ့အတိုင်း တူနေတဲ့ရုပ်လေးတွေနဲ့ ကောင်မလေးတိုင်းလိုလိုရဲ့ မျက်ခွံပေါ်က အမာရွတ်လေးတွေအကြောင်းပြောပြအုံးမယ်)
Gangnam က လမ်းတစ်ခု... လူတွေကိုကျ ဓာတ်ပုံလျှောက်ရိုက်လို့မကောင်းတော့ မရိုက်ခဲ့မိဘူး...
တည်းခိုခန်းပြန်ရောက်တော့ ရေမိုးချိုး တစ်နေ့ကုန်သွားပြန်ပါပေါ့လေ... ဒါနဲ့ ညကျတော့ ကိုဖေစစ်နိုင်က ဖုန်းဆက်ပြီးနောက်နေ့ အစီအစဉ်ကိုမေးပါရော... သူနဲ့ စနေနေ့တွေ့မယ်ချိန်းထားတာကိုး... ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ကလဲ Seoul အတွက်ကျတော့ သေချာ Itinerary ဆွဲမလာခဲ့မိတော့ ဘယ်သွားမလဲ မစဉ်းစားရသေးဘူး... ဒါပေမဲ့ သူဖုန်းခေါ်မေးတာကို ကျေးဇူးတင်ရမယ်... မစဉ်းစားချင်လဲ စဉ်းစားရတော့မယ်လေ... မဗေဒါက အဲလို့ မီးထိုးပေးနေမှ အိမ်စာလုပ်တာ... ဟဲ... ဒါပေမဲ့ ဖြစ်ချင်တော့ ကျွန်မတို့ ကိုရီးယားရောက်နေတာ ဖေ့ဘွတ်ကနေ ကျွန်မတို့နဲ့ စကာင်္ပူမှာသိခဲ့တဲ့ အစ်မကြီးတစ်ယောက်ကတွေ့ပြီး တွေ့ဖို့လဲဆက်သွယ်ထားတော့ သူနဲ့ မနက်ဖြန်တွေ့ဖို့ချိန်းထားသေးတယ်... Schedule တွေ တိုက်ကုန်တော့မယ်... ဟိ... ဒါပေမဲ့ အဲ့အစ်မကြီးကတော့ မနက်ပိုင်းပဲ တည်းခိုခန်းကိုလာတွေ့မယ် စကားလေးဘာလေးပြောမယ်တဲ့... မဗေဒါ အစ်မကလဲ သူနဲ့ ဖုန်းပြောရင်းချိန်နေတာ... ကိုဖေစစ်နိုင်က သွားချင်တဲ့နေရာတွေကဘာတွေလဲပြောကြည့်ဆိုတော့... ကိုယ်က Petite France နဲ့ Nami Island လဲ တစ်ရက်အချိန်ပေးသွားရမယ်... မြို့လယ်ခေါင်မှာ ချောင်းလိုလို မြောင်းလိုလို ရုပ်ရှင်တွေထဲပါတတ်တဲ့နေရာလဲ (Cheongyecheong stream) သွားချင်တယ်၊ မြို့လည်ခေါင်မှာ ထိုင်နေတဲ့ ဘုရင်ရုပ်ကြီးနေရာကိုကျတော့ မဗေဒါအစ်မရဲ့ Must go စာရင်းထဲပါနေတော့သွားချင်တယ်၊ Dongdaemung တို့ တခြား မြို့ထဲကနေရာတွေလဲ သွားချင်တယ်ဆိုတော့... အစ်ကိုက မြို့ထဲက သူလိုက်ပို့ပေးမယ်တဲ့... Petite France နဲ့ Nami Island (Winter Sonata ရိုက်တဲ့ ကျွန်း) ကိုတော့ သူ မလိုက်တော့ဘူးတဲ့... ဒါဆို မနက်ဖြန်ကို တခြားချိန်းထားတဲ့ အသိအစ်မကြီးလဲ လာမယ်ဆိုတော့ သူမလာတော့ဘူးတဲ့ မနက်ဖြန်ကို Nami Island ဘက်သွားလို့ သူက ဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တယ်... အဲ့ကျမှပဲ အိမ်စာပြီးသွားတော့တယ်... လူတောင် စဉ်းစားလိုက်ရတာ ခေါင်းတော်တော်မူးသွားတယ်။ ဒီလိုနဲ့ မနက်ဖြန် ဆက်ရမဲ့ ခရီးကိုလဲ ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုတော့ စိတ်ချလက်ချ အိပ်လို့ရသွားတာပေါ့...
အောက်က ဗွီဒီယိုလေးကတော့ Bonus အနေနဲ့ပေါ့နော်.... Double Rock Spin သူတို့ စီးနေတုန်းရိုက်ထားတာ... ပြီးတော့ အဲ့ဒိနေ့က Vlog လေးပေါ့...
Bonus Video ofaride at Double Rock Spin
Posted by mabaydar at 1:11 AM 17 comments :
Posted by mabaydar at 5:30 PM 11 comments :
ဒီနေ့က Blog Day လို့ ဖေ့ဘွတ်ပေါ်မှာ သူများတွေပြောတာတွေ့လို့ အမှတ်တရပိုစ့်လေး တစ်ပုဒ်ရေးဖို့ စိတ်ကူးပေါ်မိပါတယ်… 2008 တုန်းကတော့ စကာင်္ပူမှာရှိတဲ့ မြန်မာဘလော့ဂါတွေ Pasir Ris မှာ BBQ လုပ်စားကြတာ မှတ်မိသေးတယ်… အဲဒိတုန်းကတော့ ဘလော့တွေ စခေတ်စားခါစ ဘလော့ဂါ ပထမ Batch လို့တောင် ပြောရမဲ့သူတွေပေါ့… ဒါပေမဲ့ မဗေဒါက နေ့စွဲတွေဆို မမှတ်မိတတ်လွန်းလို့ (ကိုယ့်မွေးနေ့တောင် ရက်နဲ့ လနဲ့ကို ငယ်ငယ်က သိပ်ကွဲတာမဟုတ်ဘူး… :P ) Blog Day ဆိုတာကိုလဲ အမှတ်မဲ့ပါပဲ…
ဖေ့ဘွတ်ပေါ်မှာ ဘလော့ဂါတစ်ချို့နဲ့ ဘလော့တွေ ဖတ်နေကျသူတစ်ချို့က Blog Day အထိမ်းအမှတ်နဲ့ ဟိုတစ်ချိန် ဘလော့ခေတ်စားစဉ်အချိန်တွေကို ပြန်ပြောကြ၊ သူတို့ကြိုက်တဲ့ ဘလော့တွေ လူသိများ စာရေးကောင်းတဲ့ ဘလော့တွေအကြောင်းပြောကြတော့ ကိုယ်လဲပြောချင်လာတယ်… ဒါပေမဲ့ သိတဲ့အတိုင်းပဲ စာဖတ်ပျင်းသလို ဘလော့လည်လဲ ပျင်းတဲ့ မဗေဒါအတွက် ဘယ်ဘလော့ကို အမြဲလည်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ရှားပါတယ်… တစ်ခါတစ်လေလောက် သွားလည်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ အကြောင်းရေးတဲ့ ဘလော့တွေဆို ပိုစ့်တွေ အများကြီး တစ်ခါတည်းဖတ်လေ့ရှိပါတယ်… ဘလော့ဂါအစွဲနဲ့ ကြိုက်တာထပ် ရေးတဲ့ အကြောင်းအရာပေါ်မူတည်ပြီး ကြိုက်တယ် မကြိုက်ဘူးကို ဆုံးဖြတ်လေ့ရှိပါတယ်… (ဒါပေ့ါ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပုံစံမျိုး အမြဲရေးတတ်တဲ့ ဘလော့ဂါဆိုရင်တော့ ဦးစားပေးလည်ဖြစ်တာရှိတာပေါ့)….
ဘလော့ဂါဒေးမှာ တခြား ဘလော့တွေကို သိပ်မလည်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်မ ဘာလို့များပိုစ့်ရေးနေသေးလဲလို့ မေးမယ်ဆိုရင်တော့… ဘလော့ဂါဆိုတာ ကနဦးမှာ ဖတ်သူရှိရှိမရှိရှိ ကိုယ်ဝါသနာပါလို့ စပြီး စာရေးကြတယ်ဆိုပေမဲ့… ငါ့ဘလော့လေးနဲ့ ငါ့စာလေးကို ဖတ်နေတဲ့သူရှိနေပါလားဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကြောင့်သာ ဆက်လက်တည်ရှိနေတာများတယ်… အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ချက်တင်တက်ရင်း ASL please ဆိုတာတွေနဲ့ စခဲ့တဲ့ Friendship တွေဟာ နောက်ပိုင်းကျရင် ပြောစရာမရှိ ပျင်းပြီး ရေရှည်ခင်မင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ မိတ်ဆွေက ရှားတယ်… ဒါပေမဲ့ ဘလော့ကျတော့ အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး… ကိုယ်ရေးထားတဲ့ စာတွေကို ဖတ်တဲ့သူကလဲ လာဖတ်ပြီး သူတို့ အမြင်တွေကို ပြန်ပြောတဲ့အတွက် အမြဲ မရိုးတဲ့ စကားဝိုင်းတစ်ခုရတယ်။ အဲဒိအတွက် စာရေးသူကလဲ စာဖတ်သူနဲ့ ဆက်နွယ်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်… စာဖတ်သူဘက်ကလဲ၊ ရေးတဲ့သူရဲ့ စာတွေ (ဆိုပါတော့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပဲရေးရေး၊ အတွေးအခေါ် ရသပဲရေးရေး) စာရေးသူရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ တွေးခေါ်မှု အရေးအသားစတိုင် စတာတွေကို တနည်းနည်းနဲ့တော့ ရင်းနှီးမှုရှိနေတော့ လူမမြင်ဖူးပေမဲ့ သူ့အကြောင်းသိနေသလိုခံစားရတော့ ရင်းနှီးမှုက ပိုလေးနက်တယ်လို့ထင်တယ်…
အရင်က ပြောဖူးပါတယ်… မဗေဒါ ဘလော့စရေးတုန်းက ကိုယ့်ဘလော့ကို လူတွေဒီလို လာဖတ်လို့ရမှန်း မသိခဲ့ဘူး… ဒါပေမဲ့ မဗေဒါရဲ့ ဘလော့လေးဟာ မဗေဒါကို အမာခံအားပေးနေတဲ့ သူတွေမရှိရင် ဒီနေ့ထိတောင် ရှင်သန်နေအုံးမှာ မဟုတ်ဘူး… ဘလော့လေးကနေ ပတ်သတ်ပြီး ကိုယ့်မှာ စာပေ အသိုင်းအ၀ိုင်း မိတ်ဆွေ နယ်ပယ်တစ်ခုရတယ်… အဲ့ဒါလေးကလဲ ပိုက်ဆံနဲ့ တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ အရာလေးတစ်ခုပဲ… အဖေကပြောတယ် အပေါင်းအသင်း မိတ်ဆွေဆိုတာ အုပ်တစ်ချပ်ချင်းစီ ထပ်ထပ်ပြီး အချိန်နဲ့ တပြေးညီ တဖြေးဖြေးတည်ဆောက်ရတဲ့ နန်းတော်တစ်ခုလိုပဲတဲ့… တစ်ရက်ထဲနဲ့ လိုချင်တယ်ဟေ့ဆိုပြီး ကိုယ့်ကို အပြိုင် နန်းတော်ကြီးတစ်ခု မတည်ဆောက်နိုင်ဘူးတဲ့…ဟုတ်ပါတယ်… မိတ်ဆွေဆိုတာ အချိန်၊ ခွန်အားနဲ့ စိတ်ထား စတာတွေ အရင်းတည်ပြီး အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ မမျှော်လင့်လေ အမြတ်ရလေဖြစ်တဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု တစ်ခုဆိုတာ အသက်ကြီးလာတာနဲ့ အမျှ ကျွန်မသဘောပေါက်လာတယ်…
ကျွန်မကို တစ်ချို့ အပြင်က လူတွေက သိပ်ပြီး အသိမိတ်ဆွေများတယ်နော်တဲ့… (ကျွန်မကတော့ အဲ့လိုမထင်ပါဘူး) ဒါပေမဲ့ သူတို့ပြောတော့လဲ ဟုတ်နေသလိုလို… ဘယ်ခရီးသွားသွား ဒေသခံ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိရှိနေတော့ သူတို့ဒီလိုထင်မှာပေါ့… အမှန်တော့ အဲဒိ ခင်မင်မှုတွေက သူတို့ဆီက ဘာမှ မမျှော်လင့်ပဲ စိတ်ရင်းနဲ့ ခင်လို့ သူတို့မေတ္တာ ယောင်ပြန်တယ်ပဲမှတ်ပါတယ်… ဒါဟာလဲ ဒီဘလော့လေးရဲ့ ကျေးဇူးတွေပါပဲ… သူတို့ကလဲ ကိုယ့်အကြောင်းသိချင် ဘလော့ဖတ်လိုက်တာနဲ့ ကိုယ်ဘာလဲဆိုတာ အနည်းနဲ့အများ သိထားတော့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး သံသယပွားနေစရာသိပ်မရှိဘူးလေ…
ဒီနေ့ Blog Day မှာ သူများတွေက သူတို့ စစချင်းဖတ်ဖြစ်တဲ့ အမှတ်ရတဲ့ အထင်ကရဘလော့ တွေအကြောင်းပြောကြတယ်။ မဗေဒါကလဲ ဘလော့ဒေးမှာ မဗေဒါ ဘလော့ပေါ်က အမှတ်တရ စာဖတ်သူတွေအကြောင်းရေးရမယ်...
သူတို့မရှိရင် မဗေဒါဘလော့ဆိုတာ ဆက်လက်ရပ်တည်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် ဒီပိုစ့်မှာ မဗေဒါဘလော့ကို အားပေးကြတဲ့ ချစ်တဲ့ စာဖတ်သူ သူငယ်ချင်းတွေကို တန်းစီကျေးဇူးတင်ဖို့ ဒီပိုစ့်ကို ရေးပါတယ်…
(မှတ်ချက်။ မဗေဒါရဲ့ ကျေးဇူးတင်တဲ့ List မှာ နာမည်နဲ့ တကွ မပါလာခဲ့ရင်လဲ မဗေဒါကို နားလည်ခွင့်လွှတ် ဗွေမယူကြပါနဲ့လို့ တောင်းပန်ပါရစေ…. မဗေဒါလဲလူသားပဲ ပေမို့ အမှားအယွင်း မေ့လျော့မှုဆိုတာက မလွှဲရှောင်နိုင်ဘူးလေ)
ပထမဆုံး ကိုယ့်ရဲ့ Biggest Silent Readers အဖေနဲ့ အမေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်… ဟိုးအရင်ကတော့ ဖေဖေက ကျွန်မ ရုပ်ရှင်မင်းသားတွေအကြောင်းရေးရင် သိပ်မကြိုက်ခဲ့ပေမဲ့ ခုတော့ ဒီပိုစ့်ရေးလိုက်ပြီးရှင်းပြတယ် ကျွန်မရဲ့ အမြင်ကို သေချာပြောပြတော့ သူနားလည်သွားပါပြီ… သူမကြိုက်တော့လဲ အဲ့ပိုစ့်တွေ မဖတ်နဲ့ပေါ့နော်… ပြောရရင် ဘလော့စရေးတုန်းက အိမ်ကလူတွေ၊ ကိုယ်နဲ့ အပြင်မှာ သိတဲ့သူတွေတစ်ယောက်မှကို အသိပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူး… အဲဒါကြောင့် မဗေဒါ ဘလော့ရဲ့ နာမည်က အစက မဗေဒါရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်လို့ပေးခဲ့တာ။ အဖေက နောက်မှ သူဖတ်နေကျ သတင်းဝက်ဆိုဒ်မှာ ကျွန်မဘလော့ကိုတွေ့လို့ စဖတ်ဖြစ်တာ… အဲ့တုန်းက ကိုယ်က ဘလော့လိပ်စာတောင် သူ့ကို မပေးလို့ သူ့ခမျာဖတ်ချင်ရင် အဲ့ဝက်ဆိုဒ်ကို သွားပြီး ကျွန်မလင်ခ့်ကို ရှာဖတ်ရတယ်… ခုတော့ သူလဲ အင်တာနက်ကျွမ်းသွားပြီဆိုတော့ လိပ်စာသိသွားပြီ… :P ။ မေမေဆို ကျွန်မလိုပဲ စာဖတ်သိပ်ပျင်းတာ။ ဗေဒင်စာအုပ်ကလွဲလို့ သူက သိပ်ဖတ်တာမဟုတ်ဘူး… ဖေဖေဖတ်ပြတာပဲ နားထောင်တာ… ဒါပေမဲ့ ကျွန်မဘလော့ကိုတော့ ဒိုင်ခံအားပေးတာ… အရင်က သူတို့ဖတ်တယ်ဆိုတော့ နည်းနည်းလေး စိတ်ကျဉ်းကျပ်သလိုလို၊ ရှက်သလိုလိုဖြစ်လို့ အရေးကျဲသွားသေးတယ်… ခုတော့ သူတို့ ၂ယောက်လုံးက ဖတ်ဖြစ်နေရင်တောင် ကျွန်မရှေ့ဆို မဖတ်သယောင် မသိချင်ယောင်ဆောင်နေကြသေးတာ… ခုတော့ ကျွန်မလဲ ရိုးသွားပါပြီ… သူတို့ကို အရင်က မဖတ်စေချင်တာကလဲ ဘလော့ပေါ်မှာ ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင် အပြောခံရရင် မိဘဆိုတော့ ကိုယ့်သားသမီးပြောခံရတယ်ဆိုပြီး သူတို့က စိတ်မကောင်းတွေဖြစ်၊ ကျွန်မကိုလဲ တစ်ခါတစ်လေ ဆူချင်သေးတာ။ အိမ်မှာဆို အပြင်မှာ ရန်မဖြစ်ရလို့ အွန်လိုင်းပေါ်တက် ရန်ဖြစ်တယ်လို့ သတ်မှတ်ခံရသေး… ဖေဖေတောင် စာရေးချင်စိတ်တွေပေါ်ပြီး ကျွန်မဘလော့မှာ Contributor အနေနဲ့ လက်ငင်း နဲ့ လူသားဂေဟ ဆိုပြီး ရေးတင်လိုက်သေးတယ်… သူက သူ့ အိုင်ဒီယာတွေနဲ့ ကိုယ့်ကို ရေးဖို့ လာလာတိုက်တွန်းတာ… အဲဒါက Short ရှိတယ်လေ… ကိုယ်ရေးတာ သူ့စိတ်နဲ့ မတွေ့ရင် ကိုယ်တာဝန်မယူနိုင်ဘူး… အဲ့တော့ ဖေကြီးရေး သမီးစာရိုက်ပေးမယ်ဆိုပြီး သဘောတူခဲ့တာ… အဖေလဲ တကယ်စာရေးကြည့်တော့မှ အသေးစိပ်ကအစ လိုက်ရှင်းပြပြီး သေသေချာချာရေးရတာ တော်တော်ပင်ပန်းမှန်း လက်တွေ့သိသွားတယ်… ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ သူရေးချင်တာတွေကို ဆက်ရေးစေချင်ပါသေးတယ်… ဒါမှ တစ်ချိန်ပြန်ဖတ်ချင်လဲ စာတွေ ကျန်နေမှာလေ…
စာဖတ်သူထဲမှာ ဟိုးးးးးး အရင်ကတည်းက ယခုချိန်ထိ ဒိုင်ခံ ဖတ်၊ ဒိုင်ခံ ကွန်မန့်ရေးနေတဲ့ Motivator တစ်ယောက်ရှိတယ်… လမကုန်ခင် Korea Trip Day3တင်ပေးမယ်လို့ မဗေဒါ Facebook Page မှာ ပြောခဲ့တာကို သတိတရရှိတဲ့ မူလလက်ဟောင်း စာဖတ်သူ Wine ကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်... ပိုစ့်အဟောင်းတွေပြန်ကြည့်ဖြစ်တော့မှ Wine ရဲ့ ကွန်မန့်တွေကို ဟိုး ၂၀၁၀ ပိုစ့်လောက်ကတည်းက တွေ့ရတော့ စိတ်ထဲမှာ Touched ဖြစ်ပြီး ငိုချင်သလိုတောင်ဖြစ်သွားတယ်…
Shin လဲတူတူပဲ... Shin ကတော့ လူကိုပါ အပြင်မှာမြင်ဖူးတယ်... သူတို့ မိသားစုဝင်တွေလဲ အားပေးတယ်လို့ပြောတယ်... သူ့မိသားစုတွေရဲ့ Spoke person to Mabaydar ကတော့ Shin ပဲ... ဘလော့သက်တမ်း တစ်လျှောက် အနိမ့်အမြင့်တွေကို အတူဖြတ်သန်းခဲ့တယ်... မဗေဒါရဲ့ ခရီးသွားပိုစ့်တွေကို အားပေးတဲ့ Shin ရဲ့ မေမေ (အန်တီ Par Mar)ကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်… ကိုယ့်စာတွေကို လူကြီးတွေဖတ်တယ်ဆိုရင် ဂုဏ်လဲ ယူသလို Stress လဲဖြစ်မိတယ်… (ကလေးကလားတွေများဖြစ်နေသလားလို့)… ဒါပေမဲ့ အဲ့လိုတွေးလိုက်တာနဲ့ ဘာစာမှ မရေးဖြစ်တော့ဘူး…
မဗေဒါဘလော့ စစချင်းဖြစ်တည်လာတုန်းက မြန်မာဘလော့ရေးတဲ့သူမဟုတ်ပဲ အင်္ဂလိပ်ဘလော့ဖြစ်စေ၊ တစ်ချို့ကျတော့လဲ မဗေဒါ Identity တောင် လိုက်ရှာလို့မရပေမဲ့ ကိုယ့်ဘလော့တွေကို အမြဲလာအားပေးတယ်ဆိုတာသတိထားမိတဲ့စာဖတ်သူတွေကို သတိတရဖြစ်မိတယ်… ဒီစာရင်းထဲက လူတစ်ချို့က ခုနောက်ပိုင်းတော့ လာဖတ်သေးလာ မဖတ်သေးလားတော့မသိဘူး… ကွန်မန့်တွေ မတွေ့တော့လို့… ဒါပေမဲ့ မဗေဒါက ကွန်မန့်တွေပုံမှန်ပေးဖူးလို့ မှတ်မှတ်ရရ သိနေတဲ့သူတွေပေါ့နော်… အမြဲ ကနဦးကတည်းက မဗေဒါဘက်ကနေ အားပေးတတ်တဲ့ စာဖတ်သူတွေကတော့… FFOX, Kiwi, :P , Life is for success, (သူတို့တွေ လာမဖတ်တော့ဘူးထင်တယ်)။ ဟိုးအရင်ကတည်းက မဗေဒါ ဘလော့ပေါ်မှာ အားပေးစကားတွေလဲပြောခဲ့ အမြဲလဲရပ်တည်ပေးခဲ့ ခုထက်ထိလဲ ဖေ့ဘွတ်ပေါ်မှာ အဆက်အသွယ်ရှိနေတဲ့ မ Shwun Mi, မဗေဒါရဲ့ မဆုံးသော ဇာတ်လမ်းတွဲဝတ္တုကြီးကို စိတ်မဆိုးပဲ နှစ်ပေါက်အောင် ထိုင်စောင့်နေတဲ့ Than Yaw Zin, ခရီးသွားပိုစ့်တွေ ရေးပါဟဲ့ ရေးပါဟဲ့ဆိုပြီး မဗေဒါကို အစဉ်မြဲ အားပေးနေတဲ့ (သူနောက်က မီးမထိုးရင် မဗေဒါရဲ့ ဟောင်ကောင်နဲ့ သြစီပိုစ့်တွေ ပြီးခဲ့ပါ့မလားမသိ) Mayflower poe, စကားနည်းပေမဲ့ အမြဲ အားပေးနေတယ်ဆိုတာကို ခံစားလို့ရတဲ့ Khine Su Hlaing (Sweet Sweet), facebook ပေါ်မှာလဲ အမြဲ Active ဖြစ်တယ် စာတွေလဲ အများကြီး ဖတ်နိုင်တဲ့ Thant Swe, ဂျပန်က မဗေဒါဘလော့ကို တောက်လျှောက်အားပေးလာတဲ့ စာဖတ်သူ စစ်စစ် မSwe Swe Thant (ဆုံတွေ့ဖို့ ကံပါတော့ မနှစ် ဒီဇင်ဘာလတုန်းက ပြင်ဦးလွင်က ကန်တော်ကြီးပန်းခြံထဲမှာ ဆုံဖြစ်ကြတယ်၊ Whatasurprise, right? We are fated to meet), ခရီးသွားပိုစ့်တွေမှာရော ကိုရီးယားရုပ်ရှင်တွေကို အမြင်တွေရော ဖလှယ်တတ်တဲ့ မLotus Phyu, အမြဲအားပေးနေတာ သေချာတဲ့ Nang YN Yumm … blog စရေးကတည်းက သူတို့ ၂ယောက်ချစ်သူမဖြစ်ခင်ကတည်းက ကိုTin Maung Htay blog နဲ့ ရင်းနှီးခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း လင်မယား ၂ယောက်လုံးနဲ့လဲ ဘလော့ကနေ ရင်းနှီးကာ သူတို့ မင်္ဂလာဆောင်အထိပါ Emcee လုပ်ပေးခွင့်ရခဲ့တဲ့ Naychi Maung နဲ့ Tin Maung Htay... နောက်ပြီး အများကြီးကျန်ပါသေးတယ်…
ခု တစ်ခေါက်တော့ မဗေဒါကို ကွန်မန့်တွေ အမြဲမပေးပေမဲ့ (တချို့ဆို Silent Readers စစ်စစ်ကြီးတွေပေမဲ့) မဗေဒါကို ဖေ့ဘွတ်မှာ လာအက်တော့ မဗေဒါက ကိုယ့်ဘလော့ reader တွေကိုပဲ လက်ခံချင်တော့ မတ်စေ့ပို့ပြီးမေးလိုက်ရင် မဗေဒါရဲ့ ဘလော့ကို လာဖတ်လေ့ရှိပါတယ်လို့ သူတို့က ပြောပြကြတာ… ခုလို အသိပေးကြတဲ့ ချစ်လှစွာသော စာဖတ်သူ သူငယ်ချင်းတွေပါ… တစ်ချို့ဆို သူတို့ ဘယ်ပိုစ့်ကိုတော့ မှတ်မှတ်ရရ ကြိုက်ပါတယ်လို့တောင်ပြောတယ်… အဲ့လိုဆို ကိုယ့်မှာ ကြည်နူးရတာ မပြောပါနဲ့တော့… သူတို့တွေကတော့…
မဗေဒါရဲ့ ဘလော့ကို Subscribe ထားတယ်ဆိုတဲ့ Kyaw San Win, Kyaw Zaw Khant, I hear Your voice Drama Review ကတည်းက ကြိုက်လို့ ဖေ့ဘွတ်ပေါ်မှာ လာအက်တဲ့ Moh Moh Htay Aung, စကာင်္ပူရောက်အလွဲများမှာ မcut ကို မှတ်မှတ်ရရရှိနေတဲ့ Soe Yu New, “Even though your writing style is not catchy but the story line itself is quite interesting.” ဆိုပြီး သေသေချာချာ ဝေဖန်ပေးတဲ့ Hinthar ဟင်္သာ, ကိုယ်ဘလော့ပေါ်မှာ ကြုံတွေ့ရတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုမှာ ကိုယ့်ဘက်ကနေ စိတ်တိုပေးခဲ့တဲ့ Aye MyaThandar Swe, ဘောင်ဘင်ခတ်တဲ့ဖားကို ကြိုက်လို့ facebook ပေါ် ရှယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ Phyo Thu, သူ့ဖေ့ဘွတ်အကောင့်ကတော့ Deactivated ဖြစ်သွားပေမဲ့ အရင်က မတ်စေ့ပို့ပြီး ပြောခဲ့တဲ့ Na HNa, ကိုရီးယား မင်းသားတွေအကြောင်းနဲ့ မဗေဒါရဲ့ Emcee အတွေ့အကြုံလေးကို ဖတ်တယ်ဆိုတဲ့ Aye Nyein Aung, ဘလော့မှာရေးထားတာတွေကို ဖေ့ဘွတ်မှာ ပြန်တင်ပါလား ရှယ်ဖို့လွယ်တာပေါ့လို့ အကြံပေးတဲ့ Win Min Oo Comet, ခရီးသွားပိုစ့်တွေနဲ့ ရုပ်ရှင် review တွေကြိုက်တယ် မဗေဒါထပ် ၈လ ငယ်တယ်ဆိုတဲ့ Ayenb Ae'ae', ဘလော့လဲဖတ်တယ် မဗေဒါလုပ်တဲ့ ဗွီဒီယိုတွေလဲ အားပေးတယ်ဆိုတဲ့ ကို Mya Soe, Videos နဲ့ ဟော်တယ် ရီဗျူးတွေကို ကြည့်ရတာကြိုက်တယ်၊ ခရီးသွား ၀ါသနာတူတဲ့ Yan Paing Oo, မဗေဒါဘလော့ဖတ်တယ်လို့ အသိပေးတဲ့ Sandar Hlaing, Phu Ngone, Yin Min Htwe, Yamin Ohmar, 心王 နဲ့ မဗေဒါ ဖေ့ဘွတ်လစ်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ Silent Readers တွေအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
အမှန်အတိုင်း မရှက်တန်းဝန်ခံရရင် ဒီနေ့ Blog Day မှာ သူများတွေက သူတို့ ဖတ်တဲ့ ဘလော့တွေအကြောင်းပြောတော့ ကိုယ့်ဘလော့ကိုများ တစ်ဦးတစ်ယောက်က မှတ်မှတ်ရရရှိလေမလားလို့ မျှော်လင့်မိတယ်… ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ဘလော့က First Class Blog တွေလို တန်းမ၀င်သေးဘူးထင်ပါတယ်… မဗေဒါဘလော့ကို အမှတ်တရဖြစ်တဲ့သူ မရှိပါဘူး… ဒါဟာ ကိုယ်လိုနေသေးလို့ပဲ… ကိုယ့်အရေးအသား တိုးတက်ဖို့ လိုနေသေးလို့ပဲလို့ ယူဆပါတယ်… ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူမှ ကိုယ့်ဘလော့ကို အရင်ဆုံးသတိမရလဲ ဖတ်ဖြစ်နေသေးတဲ့ ကိုယ့်စာဖတ်သူတွေရှိနေသေးတယ်လေ… ဒါနဲ့ ဗြောင်ဗြောင်ပဲ ဒီစတေးတပ်လေးကို ဖေ့ဘွတ်မှာ တင်မိတယ်…
“blog day တဲ့ မဗေဒါရဲ့ တန်းမဝင်တဲ့ ဘလော့လေးကို သတိရဖြစ်တယ်ဆို လက်ညိုးထောင်။” ဆိုပြီးပေါ့…
ဒီလိုဆိုတော့ သတိတရ အသိပေးတဲ့ ကျွန်မရဲ့ အပျံစား အမာခံစာဖတ်သူတွေက လာအားပေးကြပါတယ်…
ပထမဆုံး စတေးတပ်ကို Like လုပ်တဲ့ မြန်မာပြည်က နာမည်ကျော် Presenter, Producer Ye Wint Thu (သူကဟိုးတုန်းကတည်းက မဗေဒါဘလော့ကို ဖတ်တာ သိတယ်), မဗေဒါကို စိတ်ပျော်အောင်ပြောပြီး တန်းဝင်တဲ့ ဘလော့ပါလို့ ပြောသွားတဲ့ ကိုလင်းဦး စိတ်ပညာ, ဗေဒါပန်းပုံတွေ ရိုက်လာပြီး ပို့ပေးတဲ့ May Thwe Khin, တကယ်ဖတ်ဖြစ် မဖတ်ဖြစ်တော့ မသိဘူး တခြားစတေးတပ်တွေ Like လုပ်ခဲတယ် ဒါပေမဲ့ ဒီစတေးတပ်ကိုတော့ Like လုပ်သွားတဲ့ ကျွန်မ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းရဲ့ မောင်လေး Tin Htut Win Naing, တကယ်ဖတ်မဖတ်တော့ မသိ (ဖတ်ရင်တောင် ကိုရီးယားခရီးပိုစ့်လောက်ပဲဖတ်မယ်ထင်တယ်) ကိုရီးယားက အရမ်းဧည့်ဝတ်ကျေပြီး အရမ်း ဗွီဒီယိုရိုက်တာ တော်တဲ့ ကိုPhay Sist Naing, ဟောင်ကောင်က ၀တ္တုတိုလေးတွေ သူ့ဘလော့မှာရေးလေးရှိတဲ့ မSwe Lay Mon, ဟိုးအရင်ကတည်းက မဗေဒါ ဘလော့ပေါ်မှာ ကွန်မန့်တွေပေးဖူးတဲ့ April PuuTay, ကွန်မန့်မှာ လက်ညှိုးတကယ်ထောင်သွားတဲ့Thiri Han, မဗေဒါ စာတွေကို တကယ်ဖတ်တယ်လို့ စိတ်ထဲက ခံစားရတဲ့ Kyawthetlatt Maung, မဗေဒါဘလော့ကို တစိုက်မတ်မတ် အားပေးလာတာ သေချာတဲ့ ကိုAung Myo Kyaw, ခရီးသွားဗဟုသုတတွေနဲ့ movies review တွေကို မဗေဒါရဲ့ BLOG မှာ အခုထိ သတိတရ ရှာဖတ်နေရတုန်းပဲလေ ဆိုတဲ့ New Ni, ဖေ့ဘွတ်ပေါ်မှာတော့ အမြဲ interact ဖြစ်တဲ့ မစုစုအေး, မKhine Phyu Zaw, မAye Phyo, Hnin Nu, Phyu Phyu, Mar Mar Thet, Vista Aung, Hmwe Ma, Moe MyatMon Win, Mady June (Thida Linn), Waing Sunny, May Zin, Myo Min Tun, Naw Phaw, Bo Bo, Warso aung, Nu War Hsan, Pyi Phyo Sei, Min Win Kyaw Kyaw, Duwun Duwun, Ei Ei cho, Htike Htike Aung… ဒီပိုစ့်ကို ရေးပြီးမှ ထို Status ကို Like လုပ်ပြီး အားပေးဖြစ်သော သူငယ်ချင်းများအားလုံးကို အရမ်းအရမ်း ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်… (ကျန်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လဲ ကျေးဇူးမတင်လို့မဟုတ်ပဲ လူသားတစ်ဦးရဲ့ အမှားမကင်းတဲ့ အဖြစ်ကြောင့်သာဖြစ်ပါတယ်…)
ကွန်မန့်ရေးတဲ့သူတွေပဲ ကျေးဇူးတင်သလား? Silent Readers တွေလဲရှိပါတယ်နော်လို့ ဆိုတဲ့ Khin Sandar Ko, မဗေဒါရဲ့ ဆုတောင်းကဗျာက Heart ထိတယ်ဆိုတဲ့ Taw Thu Ma, ဖေ့ဘွတ်ပေါ်မှာ မဗေဒါဘလော့ Reader တစ်ယောက်လို့ မဗေဒါ ယူဆတဲ့ Feng Yun, ကိုရီးယားကားတွေအကြောင်းနဲ့ ကျန်ခဲ့လို့မဖြစ် Facebook ပေါ်မှာလဲ အမြဲ ဆက်သွယ်ဖြစ်တဲ့ SandaKuu Kuu, မှတ်မှတ်ရရ သိနေတဲ့ Nandar Myo Lwin, ခင်မီမီသိန်း, Daw Soe Sandy Lin, KuKu Dosmin, May Oo, Soe Yu Htet, Avo Ca Do, ကိုရီးယား အဆိုတော်တွေ Idols တွေကို ကိုယ့်ထက်တောင် မှန်မှန်ကန်ကန်အားပေးတဲ့ Si Mon, Htay Thu Lwin, ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲ Review တွေ ဒိုင်ခံအားပေးလို့ ကိုယ်က ယောကျာင်္းလေးနာမည်နဲ့ မိန်းကလေးသုံးနေတာလို့ ထင်မိလို့ မေးမိတော့ သူလဲ အားရင် ကိုရီးယားကားကြည့်ပါတယ်ဗျာ ဆိုတဲ့ ကိုZayar Kyaw, သူ့ Movie Review လေးတွေလဲ ကိုယ်ဖတ်ဖြစ် ကိုယ့် Movie Review တွေဆိုလဲ အမြဲ Like နေကျ Zwel Lwin, အရင်ကတည်းက မဗေဒါဘလော့ကို ဖတ်တဲ့ Ya Min Nwe, စကားပြောရင် ခင်ဖို့လဲကောင်းတယ် ပြီးတော့ မဗေဒါက တစ်ခါတစ်လေ စိတ်တိုလို့ ပြောမှားဆိုမှားရှိလဲ ဗွေမယူတတ်တဲ့ အလွန်တရာမှ လျှို့ဝှက်တတ်သော မဗေဒါရဲ့ ခရီးသွားပိုစ့်တွေဖတ်တယ်ဆိုတဲ့ Silent Readers စစ်စစ် Nay Phyo Aung, Page မှာရော Friendlist မှာရော အားပေးတဲ့ Lavender WM, ဟိုးအရင်ကတည်းက ဖတ်တဲ့ SweetPo Dinn, မဗေဒါရဲ့ Drama Review တွေဖတ်တာ ၂နှစ်လောက်ရှိပြီ မဗေဒါ Recommend တာတွေပဲ လိုက်ကြည့်တာလို့ ချစ်စရာကောင်းအောင်ပြောတဲ့ Mya Thinzar Kyaw, ဖေ့ဘွတ်ပေါ်မှာလဲ interactive ဖြစ်တဲ့ Amy You, Ar Thin Zi, Khine Nyein, Thinzar Khaing, Aye Thet Maw Win, Jang Keun Suk ရဲ့ fan တွေမို့ သူ့အကြောင်းရေးထားတဲ့ မြန်မာဘလော့ရှိတာကို ၀မ်းသာပြီး ပိုစ့်လေးတွေ ရှယ်ပေးတဲ့ Khine Yin Mon, Mya Thandar Htay, Yin Min Htwe.
အထူးသဖြင့် မဗေဒါနဲ့ Friend မအက်ထားပေမဲ့ Personally မဗေဒါနဲ့ မသိပေမဲ့ Page ကို Like လုပ်ပြီး အမှန်အကန် အားပေးသူများဖြစ်ကြလို့ အရမ်းအရမ်းကို တန်ဖိုးထားတဲ့ Khine Lin, ZuZu May, Monday July, Pyae Phyo Aye, Mae Lwin, Hsu Mon, Khine Thinzar Soe, Khin Cho Lwin, May Tun, Kyaw Bo, Khin Khin Ei, Moe Thu Kha နဲ့ Page ကို Like ထားသူများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
နောက်ပြီး မဗေဒါဘလော့မှာ ကွန်မန့်ချန်သွားတတ်သော Anonymous များ၊ မဗေဒါဘလော့ကို အလိုလို ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး အားပေးကြသော အပြင်မှ သူငယ်ချင်းများ၊ အပြင်မှာ နောက်ပိုင်း သိရင်းမှ မဗေဒါဘလော့ကို ခင်လို့မင်လို့ အားပေးကြသော သူငယ်ချင်းများ၊ မဗေဒါကို ခင်လို့ မင်လို့ပဲဖြစ်စေ၊ စပ်စုဖို့ စောင့်ကြည့်ဖို့ပဲဖြစ်စေ၊ ချီးကျူးဖို့ အတင်းခုပ်ဖို့ပဲဖြစ်စေ၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မျက်စိလည် လမ်းမှားရောက်လာတဲ့သူပဲဖြစ်စေ… ဘယ်လိုအကြောင်းမျိုးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် မဗေဒါဘလော့ကို ဖတ်ရှုနေသူအားလုံး အားလုံးကို Blog Day ပိုစ့်ကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါတယ်…
မှတ်ချက်။ တကယ်လို့များ မဗေဒါက နာမည်တပ်ဖို့ ကျန်ခဲ့သူများလဲ စိတ်မဆိုးကြပဲ မဗေဒါကို အောက်က ကွန်မန့်မှာ မေ့ကျန်ခဲ့ရကောင်းလားဆိုပြီး ရန်တွေ့သွားကြပါလို့…. Love you all and appreciate it.
Posted by mabaydar at 6:10 PM 22 comments :
Labels: General , သူငယ်ချင်းများ , ဗေဒါ့အကြောင်း